Global Voices teny Malagasy » Japana: Ahoana ny Fomba Ampihenana ny Fandaniana sy Hitsitsiana Herinaratra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Aogositra 2011 20:10 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana
Nahenan'ny mponina ao Japana ny fandanian'izy ireo hatramin'ny nampiharana ilay fepetra fitsitsiana herinaratra mba hiatrehana ny tsy fisian'ny angovo.
Amin'izao fotoana izao, dia 19 amin'ireo 54 mpamerin-tosika nokleary ao amin'ny foibenkerinaratra no mandeha ka namporisika mafy ireo olom-pirenena ny governemanta-indrindra ho an'ireo izay mipetraka ao antsinan'ny Japana- mba hampihena ny fampiasana angovo  mba hialana amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra noho ny loza vokatry ny foiben'ny nokleary ao Fukushima.
Araka ny fandinihina nataon'ny Ivon-toerana momba ny fikarohana Micromill , 70 isanjaton'ny Japoney nanaovana fanadihadihana no nilaza fa nanova ny fomba fanao mahazatra volana vitsivitsy lasa izay. Tanora eo amin'ny roapolo taona eo ary avy amin'ny prefektiora valo ireo olona nohadihadiana, nilaza ny ankamaroan'izy ireo fa efa mandany andro any antranony fotsiny, ka manapika jiro ary tsy mandefa ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra rehefa tsy mampiasa izany.
Tsitsio ny herinaratra, Aza alefa, sary avy amin'i Bevelle. CC BY-NC-SA 2.0
Mbola adihevitra be foana ao amin'ny firenena ny fandairan'ilay fepetra mikasika ny fitsitsiana herinaratra kanefa maro ireo nanararaotra izany mba hanova ny fahazarana amin'ny fandaniam-poana ny herinaratra.
Monina ao Kobe i Roco, ao atsinanan'i Japana, ary nilaza izy fa nanova ny fomba mahazatra azy ireo ny fianakaviany  na dia tsy voakasika mivantana amin'ny loza nokleary ao Fukushina aza io faritra ao Japana io :
Ankehitriny, nanjary mahazatra ao amin'ny fianakaviako ny manao ny mari-pana ho 28℃ !
Miezaka ihany koa izahay mba hiaraka ao anaty efitra iray ka tsy mampiasa afatsy fitaovana mpanitsy hafanana iray ihany !
Izany no zavatra sasantsany izay tandremanay, ao ihany koa ny fatoriana adiny iray mialoha ka afaka mifoha maraina be manararaotra manao zavatra avy eo.
Tsara ihany koa ny tsy mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra toy ny solosaina na fahitalavitra rehefa eo amin'ny 2 ora eo rehefa miakatra be iny ny filàna herinaratra.
“Setsuden” (fanafohezana ny teny hoe “tsitsio ny herinaratra’) nanjary fiteny mahazatra isan'andro ary matetika aza lasa lamaody.
Setsuden fikarakarana sakafo, ohatra, nanjary malaza ao amin'ny aterineto, satria niparitaka ilay fiteny noho ny fifampizaran'ny olona ny amin'ny fomba tokony hihinanana sakafo tsara tsy mila mandany herinaratra be loatra.
Shirousagi nandefa sosokevitra vitsivitsy  tao amin'ny bilaoginy:
Amin'ny fikarakarana sakafo setsudens misy ahy, mampiasa fangaron-tsakafo marobe toy ny tofu, sakafo nampangotrahina tamin'ny soja, umeboshi nalona (paiso amin'ny boaty), ahidrano (algues), komkômbra madinika kely (cornichons), sakafo anaty boaty, fen-kisoa (jambon), trondro nofisahina sns.. aho, satria tsy mila mampiasa herinaratra na gazy ary afaka hohanina haingana ihany koa ireo sakafo ireo.
Raha mampiasa sakafo tsy maintsy andrahoina ianao, dia hiakatra ho azy ny maripàna ao anaty efitrano ka hahatsiaro mafana ianao, araka izany ny fihinanana sakafo mangatsiaka dia manampy amin'ny fitsitsiana herinaratra no sady mampangatsiatsika.
Ohatra iray tsara be ny sakafo sashimi  ao amin'ny setsuden satria afaka mihinana [trondro masaka] ary tsy mila mahandro izany akory ianao.
Efa nanomboka talohan'ny lohataona izany fikasana hitsitsy herinaratra izany, raha nivarotra ireo karazan'entana manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana herinaratra amin'ny fiainana andavanandro ny magazay mpikojakoja momba ny tao-trano sy fitaovan-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra.
Bilaogera Bota nanomboka nanova ny fiainany mahazatra tamin'ny volana Mey  raha nividy fitaovana ho azy voalohany setsuden izy:
1) Nanova ny taratasy fifanekena tamin'ny orinasan'ny herinaratra aho mba hampihena ny fetrany ambany ho 30 Ampera fa tsy 40 intsony, mampihena araka izany ny habetsahan'ny herinaratra izay afaka ampiasaiko.
2) Najanoko ny fampiasana takamoa mandany jiro be toy ny spoty sy ny takamoa krypton. (Ny jiro LED mbola lafo vidy be ka najanoko).
3) Nanoratra anarana tao amin'ny “tabilao fanatsarana ny herinaratra”an'ny Orinasan'ny Herinaratra an'i Tokyo aho ka afaka manara-maso ny fandaniana herinaratra isam-bolana.
4) Satria miomana amin'ny fiavin'ny vanim-potoana mafana aho, dia nametraka lambam-baravarana vita amin'ny ravinkazo.
Amin'ity taona ity, maro ireo fianakaviana miezaka mampitombo ny voly “vaotavo famantarana” na voninkazo Morning Glory, mba [ahazoana aloka], izany no antony tsy ahitana izany intsony eny amin'ny magazay.
Lambambaravarana Goya (voatavo), sary avy amin'i Hidetsugu Tonomura. CC BY-NC 2.0
1) Tamin'ny volana Jolay; afaka nanolo ny takamoa tamin'ny LED aho saingy rehefa mifarana ny fotoanan'ny orana ary miposaka tsara ny masoandro, dia nanapa-kevitra hampiasa fitaovana manasaraka hafanana aho noho ny fiakaran'ny maripàna. Na izany aza, mbola tsy manantena loatra aho fa tena handaitra tokoa io fitaovana io.
Fitaovana manasaraka hafanana, sary avy amin'i YTO. CC BY 2.0
Raha mbola mampisalasala foana fiovana entin'io fiovam-panao io amin'ny fandaniana herinaratra, afapo ny olona tahaka an'i @coachsuki  fa nisy vokany ny ezaka nataony.
Naharay ny taratasy momba ny fandaniana herinaratra aho! Tamin'ity volana ity, nampiasa herinaratra 31% aho,kely noho ny tamin'ny taona lasa toy izao＼(^o^)／ Mety avy amin’ ny fanovana ny takamoa tao an-trano no anton'izany, ka mampiasa fitaovana mitsoka rivotra “ventilateur” aho ankehitriny ary mampiasa ‘lamba mampangatsiatsiaka ‘ ♩ihany koa ka afaka mitsitsy tanteraka ny herinaratra aho! (o^^o)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/18/21179/
 hampihena ny fampiasana angovo: http://www.asahi.com/english/TKY201107260391.html
 fandinihina nataon'ny Ivon-toerana momba ny fikarohana Micromill: http://monitor.macromill.com/researchdata/20110415setsuden/index.html
 nanova ny fomba mahazatra azy ireo ny fianakaviany: http://blog.zaq.ne.jp/simokita18/article/1241/
 nandefa sosokevitra vitsivitsy: http://sirousagi.blog.so-net.ne.jp/2011-08-01-1
 Bota nanomboka nanova ny fiainany mahazatra tamin'ny volana Mey: http://bota1234.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301785368-1
 @coachsuki : http://twitter.com/#!/coachsuki/status/100441739822772224
 lamba mampangatsiatsiaka: http://www.treehugger.com/files/2009/01/fridge-curtain-save-electricity.php